साताका ७ स्टोरीमा विश्वभरका मानिसलाई अत्याएको कोरोना भाइरसदेखि अलमलिएको क्यानसम्म
१) कसरी बच्‍ने कोरोना भाइरसबाट ?
चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्वभरका मानिसलाई अत्याएको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी भेटिएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न कुनै भ्याक्सिन या औषधी बनेको छैन । भाइरसबारे शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका कर्मचारीलाई तालिम भने दिइएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता डा अनुप बास्तोला सतर्कताका लागि नाका–नाकामा निगरानी बढाउनुपर्ने बताउँछन् । पढ्नुस् सुनिता लोहनीको रिपोर्ट
२) समाजवाद : एउटा असफल तर अमर अवधारणा (पोडकास्ट)
उत्पादनभन्दा वितरणमा जोड दिइने भएकाले समाजवादी प्रणालीमा वितरणका लागि सधैँ अभावको अवस्था हुन्छ । स्रोतको वितरणका लागि त्यसको उत्पादन हुनुपर्छ । मानव उपयोगी स्रोत स्वत: अस्तित्वमा आउँदैनन्, निर्माण गरिनुपर्छ । मान्छेको जैविक तथा सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने यस्ता स्रोत बढीभन्दा बढी निर्माण हुनुपर्छ । सुन्नुहोस् मुराहरि पराजुलीको लेख नेपाल म्यागजिन पोडकास्टमा
३) क्यानमा किन अलमलमा ?
आईसीसीका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को रोहवरमा भएको निर्वाचनबाट क्यानको नयाा कार्यसमिति चुनिएको छ । निर्वा्चित कार्यसमितिले आफूहरू नयाा सोच र शैलीका साथ अघि बढ्ने उद्घोष पनि गरेको थियो । तर ३ महिने हनिमुन समय कटिसक्दा पनि नेपालमा क्यान छ भन्ने आभास दिने काम हुन सकेको छैन । पढ्नुस् पवन आचार्यको रिपोर्ट
४) ‘आमालाई भनेँ, म जंगल जान्नँ’ (भिडियो)
थाहा पाउने हुँदा नै उनको शरीर कुष्ठरोगले थलिएको थियो । हातहरू लुला भइसकेका थिए । दुबै गोडा कमजोर हुँदै थिए । १२ वर्षको उमेरमा उनलाई उपचारका लागि पाल्पास्थित मिसन अस्पताल लगियो । तर चिकित्सकले रोग पत्ता लगाउन सकेनन् । अनेकथरी औषधिहरू चढाइयो । औषधिको नकारात्मक असरले जिउ झन् झन् बिग्रियो । जब कुष्ठरोग भन्ने थाहा भयो, तब समाजले उनलाई जंगलमा लगेर राख्नुपर्ने बताउन थाल्यो । हेर्नुस् रविराज बरालको भिडियो
५) चुरेको ढुंगा तस्करीका कारण स्थानीय तहबीच मनमुटाव
दक्षिणी इलामको रोङ गाउापालिका वडा–६ को क्षेत्रभित्रै छ, चुरे । वातावरणीय दृष्टिकोणले चुरेमा उत्खनन गर्नै मिल्दैन । तर झापा मेची नगरपालिकाबासीले वर्षौंदेखि यो क्षेत्रका ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन् । रोङले आफ्नो क्षेत्रको चुरे दोहन नगर्न पटक–पटक अनुरोध गरे पनि मेचीनगरबासीले मानेनन् । २६ पुसमा चुरे दोहन रोक्न गएका रोङबासी र प्रहरीलाई मेचीनगरका ट्याक्टर व्यवसायीले हातपातसमेत गरेपछि विवाद चर्कियो । फलत: २७ पुसमा रोङबाट बगेर झर्ने सिद्धिनहर सिाचाइ आयोजनाको मुहान बन्द गरियो । मेचीनगरबासीले पनि रोङतिर जाने सडक बन्द गर्ने धम्की दिए । पढ्नुस् पर्वत पोर्तेलको रिपोर्ट
६) अर्थात् सुजीव शाक्य
चिनियाँ नयाँ वर्षका दिन भारत पुगेर नेपालसम्बन्धी पुस्तक विमोचन गर्ने मनसुबा छ, सुजीव शाक्यको । काठमाडौँमा अघिल्लो साता विमोचित ‘अनलिसिङ द वज्र : नेपाल्स जर्नी बिटविन इन्डिया एन्ड चाइना’ लाई उनी पेन्गुइनबाट प्रकाशित अनलिसिङ नेपालको सिक्वेल भन्न रुचाउँछन् । नेपाली अर्थतन्त्रको झन्डै एक सहस्राब्दीलाई सिंहावलोकन गरिएको यो पुस्तक पनि उही पेन्गुइनले बजारमा ल्याएको छ । पढ्नुस् बसन्त बस्नेतको रिपोर्ट
७) ओली–प्रचण्ड शक्ति संघर्ष
सचिवालयमा आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको सन्देश दिएर ओलीलाई गलाउन कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँले नेता वामदेव गौतमको भैँसेपाटी निवासमा २३ पुसमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको छुट्टै बैठक गरे । सो बैठकले सभामुख छनोटमा प्रचण्डलाई सघाउने र संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान राख्ने सहमतिमाा पुगेपछि ओली पूर्ववत् अडान छाड्न बाध्य भए । पढ्नुस् जनक नेपालको रिपोर्ट